काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी पार्थे जालमा ? यसरी भयो पर्दाफास ! – Sidha Post 24
१५ वर्षीया दीक्षा कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको एक राम्रै परिवारकी सदस्य हुन् । बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत दीक्षालाई उनकी भाउजूले केही दिनअघि भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा ल्याइन् ।
कुनै युवकले मा नसिक या तनासँगै यौ न शो षण गरेको भन्दै दीक्षा भाउजूसँगै ब्युरोमा पुगेकी थिइन् ।
खासमा दीक्षा जुन युवकबाट मा नसिक या तनासँगै यौ न शो षणमा परेकी थिइन्, ती युवकलाई दीक्षाले चिनेकी थिइनन् । युवकले आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडीबाट दीक्षालाई म्यासेज पठाएका थिए । सोही म्यासेजको रिप्लाई गर्दा दीक्षाले लामो समय मा नसिक या तनासँगै यौ न शो षणको शि कार बन्नुपरेको थियो ।
एकदिन खै किन हो उनलाई उक्त म्यासेजको रिप्लाई गर्न मन लाग्यो । उनले हेल्लो भनेर म्यासेज पठाइन्
करिब ६ महिनाअघि दीक्षालाई उनको इन्स्टाग्राममा एउटा म्यासेज आयो । Ginp-Yeo-Ho ​ नाम गरेको आइडीबाट आएको म्यासेजमा सामान्य हाई हेल्लो मात्रै गरिएको थियो । दीक्षाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा म्यासेज देखे पनि लामो समय कुनै जवाफ दिइनन् । तर एकदिन खै किन हो उनलाई उक्त म्यासेजको रिप्लाई गर्न मन लाग्यो । उनले हेल्लो भनेर म्यासेज पठाइन् ।
जब दीक्षाले रिप्लाई गरिन्, त्यसपछि उक्त आइडीबाट पनि सामान्य प्रकृतिको कुराकानी सुरु भयो । युवकले आफू नेपाली नै भएको तर बैंककमा बस्ने गरेको बताए । युवकले किशोरीलाई कहाँ कति कक्षामा पढ्ने, घरमा को को हुनुहुन्छ लगायतका कुराहरू सोधे । दीक्षाले त्यसको जवाफ दिइन् । उनीहरू बिस्तारै फेसबुकमा जोडिए ।
सामान्य औपचारिकताको कुराकानी चलिरहेकै समयमा एक्कासि युवकले दीक्षालाई अ श्लील गा लीसहितको म्यासेज पठाए । न चिनेको, न जानेको । अज्ञात व्यक्तिले गा लीग लौज गर्दै म्यासेज पठाएपछि दीक्षालाई पनि रिस उठ्यो । उनले पनि युवकलाई अ श्लील गाली गर्दै म्यासेज पठाइन् । केही समय दुवैबीच अ श्लील गा लीगलौज भयो ।
नि लम्बित समेत हुन सक्ने चिन्ता उनलाई भयो । त्यसपछि दीक्षाले ती युवकलाई त्यस्तो नगरी दिन अनुनय विनय गर्न थालिन्
त्यसलगत्तै युवकले दीक्षाले पठाएका ती सबै अ श्लील गा लीग लौजका स्क्रिनसट दीक्षालाई नै पठायो । अनि भन्यो, अब यो सबै स्क्रिनसट तिम्रो बुवा आमा तथा परिवार, तिम्रो स्कुलको प्रिन्सिपल र तिम्रा साथीहरूलाई पठाइदिन्छु र तिम्रो बेइज्जती गराइदिन्छु ।
१५ वर्ष मात्रै भएकी दीक्षा आत्तिइन् । आफूले कहिल्यै त्यस्तो बोल्ने गरेको परिवारलाई थाहा नभएको र प्रिन्सिपलले थाहा पाएमा स्कुलबाट नि लम्बित समेत हुन सक्ने चिन्ता उनलाई भयो । त्यसपछि दीक्षाले ती युवकलाई त्यस्तो नगरी दिन अनुनय विनय गर्न थालिन् ।
युवकले दीक्षाको त्यही डरलाई आफ्नो ह तियार बनाए । अनि दीक्षासँग ब्ल्या-कमेल गर्न थाले । ‘तिमीले पठाएको म्यासेज तिम्रो परिवार र प्रिन्सिपल लगायतलाई नपठाउने भए तिम्रो स्त नको ना ङ्गो फोटो पठाऊ’ भनेर युवकले ब्ल्या कमेल सुरु गर्‍यो । दीक्षाले युवकको प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् ।
दीक्षा बा ध्य भएर अनुहार नै आउने गरी आफ्नो शरीरको न ग्न फोटो पठाउन थालिन् ।
तर युवकले अनुहार नदेखाइ पठाउँदा के फरक पर्छ र । तिमी भन्ने पनि त चिन्दैन भन्दै फ काउन र ध म्काउन थाल्यो । त्यसपछि दीक्षाले अनुहार नआउने गरी आफ्नो न ग्न शरीरको फोटो खिचेर युवकलाई पठाइन् । युवकले धेरै भन्दा धेरै फोटो पाइसकेपछि फेरि अर्को ब्ल्या कमेल सुरु गर्‍यो कि तिम्रो आइडीबाट आएपछि तिमी नै हो भन्ने थाहा भइहाल्छ, अब अनुहार सहितको पठाऊ । दीक्षाले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि युवकले फेरि दीक्षाको आइडीसमेत आउने गरी स्क्रिनसट गरेर अरूलाई पठाइदिन्छु भन्दै ध म्का उन थाल्यो । दीक्षा बा ध्य भएर अनुहार नै आउने गरी आफ्नो शरीरको न ग्न फोटो पठाउन थालिन् ।
सुरुमा अनुहारबाहेकको फोटो मागेको युवक झनै हौसिन थाल्यो र पछि अनुहारसहित आउने गरी न ग्न शरीरको भिडियो नै माग्न थाल्यो । दीक्षाले आफ्नो इज्जत जोगाउन भन्दै युवकले जे जे भन्यो, त्यही गर्न थालिन् । युवकले दीक्षालाई न ग्न शरीरमा ह स्तमै थुनसम्म गरेको भिडियो पठाउन भन्दै ध म्काउन थाल्यो । दीक्षा युवकले जे जे भन्यो त्यही त्यही गर्न थालिन् । त्यसपछि युवकले दीक्षालाई आफू बैंककमा नभएर काठमाडौँमै भएको र भेट्न आउन दबाब दिन थाल्यो । दीक्षाले भेट्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कोसिस त गरिन् तर युवकले ध म्काउन छाडेन ।
युवकको ध म्की अब परिवार र प्रिन्सिपलभन्दा माथि पो र्न सा इटमा हालिदिन्छु भन्नेसम्मको आउन थाल्यो । युवकले दीक्षाको अ श्लील भिडियो पो र्न साइटमा अपलोड गरिसकेको भन्दै त्यसको स्क्रिनसट पनि दीक्षालाई पठाउन थाल्यो र भेट्न नआए त्यो पब्लिक गरिदिने भन्दै ध म्की दिन थाल्यो । तत्काल भेट्न आउन र आफूसँग समय बिताउन ध म्की दिन थालेपछि दीक्षा दिनानुदिन तनावमा पुगिन् ।
महानगरपालिका १२, भोटेवहाल घर भएको २० वर्षीय लव खड्गी । पेसाले लव एक ट्याटु आर्टिस्ट थिए
उनी विद्यालय र घरमा खाली ढोका थुनेर बस्ने र झो क्राउने गर्न थालिन् । युवकले दिएको त नावले दीक्षा एक किसिमको डि प्रेसनमा पुगिसकेकी थिइन् । के गर्ने के नगर्ने केही सोच्न सकेकी थिइनन् । पहिले सधैँ ‘कुल’ रहने दीक्षामा एक्कासि परिवर्तन आई सामान्य कुरामा पनि रिसाउने गर्न थालेपछि उनकी भाउजूले दीक्षाको गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन थालिन् । दीक्षामा आएको परिवर्तनपछि भाउजूले दीक्षालाई बोलाएर सम्झाउँदै के भएको हो भन्नुस् भनेर सोधिन् ।
ती युवक थिए काठमाडौँ महानगरपालिका १२, भोटेवहाल घर भएको २० वर्षीय लव खड्गी । पेसाले लव एक ट्याटु आर्टिस्ट थिए र ऊ वसन्तपुरमा रहेको एक ट्याटु पसलमा काम गर्थे ।
त्यसपछि बल्ल दीक्षाले आफू समस्यामा परेको र युवकले बारम्बार ध म्की दिँदै मा नसिक या तना र यौ न शो षण गरिरहेको बारे भाउजूलाई बताइन् । भाउजूले दीक्षालाई सम्झाउँदै तिमीलाई कुनै समस्या हुँदैन, त्यो व्यक्तिले तिमीलाई कुनै क्षति पुराउन सक्दैन हिँड उजुरी गरौँ र युवकलाई प क्राउ गरौँ भनेपछि दीक्षा तयार भइन् । बुवा, दाजु आदि कसैलाई पनि जानकारी नदिने शर्तमा दीक्षा भाउजूसँगै
भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा पुगिन् । अनि घटनाबारे महिला प्रहरीसँग बेलिबिस्तार लगाउँदै आफू अत्यन्तै तनावमा पुगेको र डि प्रेसनको शि कार भइसकेको बताइन् ।
सादा पोसाकका प्रहरीसँगै युवकलाई भेट्न वसन्तपुर पुगिन् । केही समयपछि युवक पनि त्यहीँ आइपुग्यो
महिला प्रहरीले दीक्षालाई सम्झाउँदै त्यस्तो केही नहुने र युवकलाई पक्राउ गर्न सकिए ती प्रमाण सबै नष्ट गराउन सकिने भन्दै सम्झाएपछि दीक्षा केही सम्हालिइन् र ब्युरोमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले फेरि दीक्षालाई उक्त युवकसँग कुराकानी गर्न र भेट्न आउन तयार रहेको बारे बताउन भने । दीक्षाले युवकको मोबाइल नम्बर पनि मागिन्, तर युवकले मोबाइल नम्बर दिन मानेन । बरु आफूले तिमीलाई चिन्ने भएको कारण वसन्तपुरको कुमारी घर छेउमा आउन भन्यो । दीक्षाले प्रहरीसँगको समन्वयमा उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन् र मङ्सिर २ गते दीक्षा सादा पोसाकका प्रहरीसँगै युवकलाई भेट्न वसन्तपुर पुगिन् । केही समयपछि युवक पनि त्यहीँ आइपुग्यो र आफू त्यही युवक भएको बताएसँगै प्रहरीले युवकलाई प क्राउ गर्‍यो ।
ती युवक थिए काठमाडौँ महानगरपालिका १२, भोटेवहाल घर भएको २० वर्षीय लव खड्गी । पेसाले लव एक ट्याटु आर्टिस्ट थिए र ऊ वसन्तपुरमा रहेको एक ट्याटु पसलमा काम गर्थे । आफू बैंककमा बस्ने गरेको बताए पनि लव कहिल्यै बैंकक पुगेका थिएनन् । काठमाडौँमै बसेर किशोरी र युवतीहरूसँग कुराकानी गर्थे र न ग्न फोटो तथा भिडियो माग गरी ब्ल्याकमेल गर्थ्यो । तर उसले कहिले पनि आफ्नो सक्कली नाम तथा ठेगाना बताउँदैनथिए । न त आफ्नो रियल फेस नै देखाउँथे ।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी नविन्द अर्यालका अनुसार लव खड्गीले ४ दर्जनभन्दा बढी किशोरी र युवतीलाई यसै गरी रोमियो ट्रयापमा पारेको पाइएको छ । अर्यालका अनुसार खड्गीको निसानामा १५ देखि १८ वर्षसम्मका किशोरी बढी परेका छन् । कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने किशोरीहरू खड्गीको रोमियो ट्रयापमा परेको पाइएको अर्यालले बताए ।
साइबार ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत इन्स्पेक्टर बुद्धि सुवेदीका अनुसार खड्गीको मोबाइलको ल्याब परीक्षण गर्दा ४६ जना किशोरी तथा युवतीको न ग्न फोटो र भिडियो पाइएको छ । सुरुमा खड्गीले आफूले दीक्षालाई मात्रै पीडित बनाएको बताएका थिए । तर उनको मोबाइलको ल्याब परीक्षण गर्दा मोबाइलको भल्टमा नामसहित ४६ जना किशोरी तथा युवतीको न ग्न फोटो तथा भिडियो पाइएको छ । यद्यपि खड्गीबारे पीडितलाई जानकारी समेत नभएको कारण अहिले एकजनाले मात्रै उजुरी दिएको र सोही उजुरीको आधारमा पक्राउ परेको हो ।
खड्गीको मोबाइलमा भेटिएको न ग्न फोटो तथा भिडियो हेर्दा खड्गीको निसानामा कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढ्ने किशोरीहरू बढी पीडित भएको पाइएको छ । खड्गीको मोबाइलमा भेटिएको फोटो तथा भिडियोको विश्लेषण गर्दा अधिकांश किशोरी १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् । ती सबै किशोरीहरूलाई सोही तरिका अपनाएर पी डित बनाएको खड्गीले बयान दिएका छन् ।
साइबर ब्यूरोको टोलीले खड्गीलाई प क्राउ गरी ल्याएपछि त्यसो गर्नुको कारणबारे सोध्दा उसले रमाइलो र यौ न आ नन्दका लागि मात्रै त्यसो गरेको बयान दिएको छ । प्लस टु पास गरेका खड्गीले पो र्न सा इटमा अपलोड गरेको जस्तो देखिए पनि आफूले पो र्न साइटमा अपलोड नगरेको दाबी गरेको छ ।
किशोरी तथा युवतीहरूलाई फ साउन खड्गीले सुरुमा इन्स्टाग्रामकै साहारा लिएको देखिन्छ । सुरुमा इन्स्टाग्रामबाट किशोरी तथा युवती छानीछानी म्यासेज पठाउँथे । ती कसैलाई पनि खड्गीले चिनेका हुँदैनथे । जब उताबाट म्यासेजको रिप्लाई आउँथ्यो, तब खड्गी कुराकानी सुरु गर्थे । आफू बैंककमा बस्ने गरेको भन्दै खड्गी सुरुमा किशोरी तथा युवतीको बारेमा जानकारी लिन्थे । अनि कुराकानीकै क्रममा एक्कासि अ श्लील शब्दहरू प्रयोग गर्दै गा लीग लौज गर्थे ।
त्यसपछि किशोरी वा युवतीले पनि त्यसै गरी गा लीग लौज सुरु गरेमा ती सबै गा लीग लौजलाई खड्गी स्क्रिनसट गरेर राख्थे र विद्यालयको प्रिन्सिपल, बुवा, दाई आदिलाई पठाइदिन्छु भन्दै ध म्काउँथे । किशोरी तथा युवतीहरू डराएर त्यसो नगर्न आग्रह गर्थे । अनि त्यही आग्रहलाई खड्गी ब्ल्या कमेल गर्न थाल्थे र दीक्षालाई गरेजस्तै गरेर न ग्न फोटो तथा भिडियो माग गर्थे र भेट्न बोलाउँथे । भेट्न बोलाउनुको उद्देश्य यौ नस म्बन्ध स्थापित गर्नुसम्मको रहेको इन्स्पेक्टर सुवेदीले बताए ।
साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेका लव खड्गी वसन्तपुरमै रहेको एक ट्याटु पसलमा ट्याटु आर्टिस्ट थिए । लवले उक्त पसलमा ट्याटु बनाउन आउने कतिपय महिला तथा युवतीको स्त न लगायतका अ ङ्ग देखिने गरी फोटो र भिडियोसमेत बनाएर राखेको पाइएको ब्युरोले जनाएको छ । इन्स्पेक्टर सुवेदीका अनुसार कतिपय युवती र महिलाले आफ्नो स्त न तथा अन्य सं वेदनशील अङ्गको वरिपरि पनि ट्याटु बनाएका छन् । त्यस्ता अ ङ्गको ट्याटु बनाउँदा लवले फोटो तथा भिडियो खिच्ने गरेको र ती फोटो तथा भिडियोलाई पनि नामसहितको फोल्डर बनाएर मोबाइलमा सामान्य अवस्थामा नदेखिने गरी भल्ट बनाएर राखेको पाइएको छ ।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी नविन्द अर्याल पछिल्लो समय डिजिटल मिसयुज बढेको बताउँछन् । अर्यालका अनुसार ब्युरोले हालसम्म १६२ वटा मु द्दा दायर गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाटै भएका छन् । अधिकांश मु द्दामा अ श्लील गा लीग लौज, गतिविधि, मा नसिक या तना र यौ न शो षणको विषय जोडिएका छन् ।
पछिल्लो समय लकडाउनका कारण अनलाइन क्लास हुँदा डिजिटल मिसयुज झनै बढेको एसएसपी अर्याल बताउँछन् । अनलाइन कक्षा भएपछि अभिभावकले छोराछोरीलाई मोबाइल दिने तर उनीहरूले त्यसको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् भनेर निगरानी नराख्दा समस्या भएको अर्यालको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाले प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् भनेर अभिभावकले निगरानी राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई बेमतलवी बनाएर छाडिदिने हो भने बालबालिकाहरू यस्तै समस्यामा पनि पर्न सक्छन् । प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न त पहिले अभिभावक नै सचेत हुनुपर्छ । अभिभावकले मनिटरिङ नगर्ने हो भने बालबालिकाहरू यस्तै ट्रयापको शि कार पनि बन्न सक्छन् ।’
एसएसपी अर्यालका अनुसार नचिनेको व्यक्तिसँग बिना कारण कुराकानी गर्नु घा तक हुनसक्ने चेतावनी दिन्छन् । अझ न ग्न तस्बिर र भिडियो पठाउनु त झनै खतरनाक रहेको भन्दै यसले भविष्यमा गम्भीर असर गर्न सक्ने चेतावनी दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पी डित त पी डित भई नै हाले । पी डकको उमेर पनि २० वर्ष मात्रै छ । उसका अभिभावकले पनि मेरो छोराले के गरिरहेको छ भनेर निगरानी गर्नुपर्थ्यो । ऊ आफैँमा कलाकार पनि हो, तर उसको दिमागमा अपराध मौलायो । त्यस कारण को कति वर्ष भयो भन्दा पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तानमाथि निगरानी गर्नैपर्छ । गलत बाटोमा गइरहेका भए रोक्नुपर्छ ।
ब्युरोका एसएसपी अर्याल लव खड्गीको मोबाइलमा ४६ जना किशोरी तथा युवतीको न ग्न तस्बिर तथा भिडियो पाइएको कारण पी डितलाई स म्पर्क गर्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘युवकले मोबाइलमा भल्ट बनाएर ४६ जनाको न ग्न तस्बिर र भिडियो राखेको पाइएको छ । उनीहरु को को हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन । हामीले पीडितको पहिचान अति गो प्य राख्ने भएकाले खोज्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन । त्यस कारण यो युवक र यस्तै प्रकृतिको अ पराधबाट कोही पी डित छन् भने ब्युरोमा स म्पर्क राख्न पनि म आग्रह गर्छु । थप अपराध र क्षति नहोस् भनेर पनि हामीलाई अन्य पी डित पनि चाहिएको छ ।’
प्रहरीका अनुसार यस्ता घटनाहरूमा अधिकांशले पैसासमेत माग गर्ने गरेका छन् । तर अभियुक्त अत्यन्तै बाठो र प्रविधिमा निपुण भएको कारण पीडितसँग पैसा मागेको वा नमागेको पुष्टि भइसकेको छैन । न ग्न फोटो र भिडियो लिएपछि रोमियो ट्रयापमा पारी पैसा मागेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।